Shiinaha Aluminium alaab adag oo saqaf ah oo saddex geesle ah Taambuugga dusha sare ee T30 Soosaarka iyo Warshad | Arcadia
Naqshad ballaadhan oo A-frame ah ayaa bixisa qol madax ah oo aad u fiican si uu si buuxda u fadhiisto oo ugu nasto teendhada una qaato aragtiyada daaqadaha waaweyn ee la baadhay
Ka samaysan 600D tayo sare leh oo hawo fiiqan hawo poly-cudbi dahaadhan si aad uga badbaado xitaa roobka iyo dabaylaha ugu culus
Qolof adag: Aluminium adag oo aluminium ah
Teendhada ugu weyn: polycotton 280G
Joodariga: 5CM dhumucda cufnaanta sare
Qaab dhismeedka teendhada: usha taageerada Haydarooliga
sallaan Aluminium telecopic sallaan
Cabbirka: xiran ： 130 * 205 * 20cm
cabirka furan: 130 * 205 * 150cm
Rakibta saqafka qaada: 60kg
Dhumucda Aluminium: 1.5mm
Dahaarka dusha sare ee lagu buufiyo electrostatic waa qalab dahaadh ah.
Iyada oo leh laba kabood oo bac ah
Cabbirka baakadka: 140 * 210 * 30cm
Logo: loo habeeyay
Qolofta aluminium 1.5mm waxay taageeri kartaa nidaamka iskudhafka ikhtiyaariga ah sidaa darteed waxaad ku qaadan kartaa qalab dheeri ah teendhada dusheeda. Hadday tahay baaskiil, kaararka korka, maraakiibta, nidaamka qubeyska ee rakiban, iwm.
Markii teendhooyinka dusha sare markii ugu horreysay ay ku dhufteen suuqa waxay ahaayeen kacaan, badanaa sababta oo ah teendhadaada iyo joodarigaaga (labada shay ee qaadaya inta ugu badan ee lagu xareeyo) ayaa hadda si habboon loogu kaydiyay saqafkaaga. Dabcan, waxaa jira faa iidooyin badan oo badan inaad lahaato taanbuug saqafka ah, laakiin sidoo kale, waxaa jira qasaarooyin fara badan, sidoo kale.
Nasiib wanaagse, cilladahaas badankood waxay la xiriiraan teendhooyinka saqafka-jilicsan ee jilicsan, iyo sidoo kale cutubyo shiraac ah oo culus oo ay adag tahay in la furo. Sababahan awgood, Teendhadayadu had iyo jeer waxay raacday qaab naqshad adag. Faa'iidooyinka dejintan waxaa ka mid ah…
Naqshadaynta gaaska-strut waxay qaadataa ilbiriqsiyo in la furo oo la xiro
Qaab-dhismeed laga soo galo / looga baxo oo saddex-geesood ah markaa uma baahnid inaad qorshaysato xeradaada teendhadaada
Qaab dhismeed badan
Waad ku xidhi kartaa teendhada sariirtaada dhexdeeda, ugu dambayntiina…
Teendhadayada Safarka waxay had iyo jeer raacday qaab naqshad adag.
Waxa intaa ka sii badan, teendhooyinka-adag ee qolofku caadi ahaan way ka sii dheer yihiin kuwa jilicsan ee jilibka u dhigma, iyaguna way fududahay in la nadiifiyo, waxayna aad ugu adkeystaan ​​roobka, barafka iyo xaaladaha cimilada dabaysha leh.
Hore: Gawaarida Gawaarida Sare 4WD
Xiga: Naqshad cusub oo saddex geesle ah oo qolof adag 2 qof aluminium aluminium ah teendhada dusha sare